Ny farany dia ny fiandohana vaovao - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Ny hoavy > Ny fiafarana dia ny fiandohana vaovao
Raha tsy misy hoavy, hoy i Paoly, dia hadalana ny mino an’i Kristy (1. Korintiana 15,19). Ny faminaniana dia ampahany tena ilaina sy tena mampahery amin’ny finoana kristiana. Manambara zavatra tena feno fanantenana ny faminanian’ny Baiboly. Afaka mahazo tanjaka sy herim-po be avy aminy isika, raha mifantoka amin’ny hafatra fototra ao aminy, fa tsy amin’ny antsipiriany azo iadian-kevitra.
Ny tanjon'ny faminaniana
Ny faminaniana dia tsy mifarana ao aminy - maneho ny fahamarinana ambony kokoa. Raha ny marina, dia mampihavana ny olombelona amin'Andriamanitra Andriamanitra; mamela ny fahotantsika Izy; dia mahatonga antsika ho naman'Andriamanitra indray Izy. Ity zava-misy ity dia manambara ny faminaniana. Ny faminaniana dia tsy vitan'ny hoe hanambara mialoha ny fisehoan-javatra fotsiny, fa ny hilazana antsika amin'Andriamanitra. Manambara amintsika hoe iza Andriamanitra, misy Izy, inona ary Izy ary manantena antsika. Ny faminaniana dia miantso ny olona hihavana amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy.
Faminaniana manokana maro no tanteraka tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha, ary manantena ny ho tanteraka kokoa isika. Fa ny ifantohan'ny faminaniana rehetra dia zavatra hafa tanteraka: Famonjena - ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay izay tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny faminaniana dia mampiseho amintsika fa Andriamanitra no mpanapaka ny tantara (Daniela 4,14); izany dia manatanjaka ny finoantsika an’i Kristy (Jaona 14,29) ary manome fanantenana ho antsika ny ho avy (2. Thessalonians 4,13- iray).
Iray amin’ireo zavatra nosoratan’i Mosesy sy ny mpaminany momba an’i Kristy ny hoe hovonoina sy hatsangana izy4,27 ny u. 46). Izy ireo koa dia nanambara mialoha ny fisehoan-javatra taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, toy ny fitoriana ny filazantsara (and. 47).
Ny faminaniana dia manondro antsika amin'ny fahazoana ny famonjena ao amin'i Kristy. Raha tsy azontsika izany, dia tsy mahasoa antsika ny faminaniana rehetra. Amin’ny alalan’i Kristy irery ihany no ahafahantsika miditra amin’ny fanjakana izay tsy hisy farany (Daniela 7,13-14 sy 27).
Ny Baiboly dia manambara ny Fiavian’i Kristy Fanindroany sy ny Fitsarana Farany, manambara famaizana sy valisoa mandrakizay. Amin'ny fanaovana izany dia mampiseho amin'ny olona fa ilaina ny fanavotana ary, amin'ny fotoana iray ihany, dia azo antoka fa ho avy ny fanavotana. Milaza ny faminaniana fa hampamoahin’Andriamanitra isika (Joda 14-15), fa tiany havotana isika (2 Pt.3,9ary efa nanavotra antsika Izy (1. Johannes 2,1-2). Manome toky antsika izy fa ho resy ny ratsy rehetra, hifarana ny tsy rariny sy ny fijaliana rehetra (1. Korintiana 15,25; Apokalypsy 21,4).
Mampahery ny mino ny faminaniana: milaza aminy fa tsy very maina ny ezaka ataony. Ho voavonjy amin’ny fanenjehana isika, hohamarinina sy hahazo valisoa. Ny faminaniana dia mampahatsiahy antsika ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahatokiany ary manampy antsika tsy hivadika aminy (2. Petrus 3,10- enina ambin'ny folo; 1. Johannes 3,2-3). Amin’ny fampahatsiahivana antsika fa mety ho simba ny harena ara-nofo rehetra, ny faminaniana dia mampirisika antsika hankamamy ireo zavatra an’Andriamanitra izay mbola tsy hita maso sy ny fifandraisantsika mandrakizay aminy.
Zakaria dia manondro ny faminaniana ho antso ho amin’ny fibebahana (Zakaria 1,3-4). Mampitandrina ny amin’ny sazy Andriamanitra, nefa manantena ny fibebahana. Araka ny asehon’ny tantaran’i Jona, dia vonona ny hanaisotra ny fanambarany Andriamanitra rehefa mitodika any aminy ny olona. Ny tanjon’ny faminaniana dia ny hiova fo amin’Andriamanitra izay manana hoavy mahafinaritra ho antsika; tsy hanome fahafaham-po ny fikitikitika antsika, mba hahitana ny "zava-miafina".
Fepetra fototra: fitandremana
Ahoana no ahafantarana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly? Amim-pitandremana lehibe. Faminaniana misy dikany "mpankafy" no nanavakavaka ny filazantsara tamin'ny faminaniana diso sy ny dogmatisme diso. Noho ny fanararaotana faminaniana toy izany dia misy ny olona maneso ny Baiboly, ary naneso an'i Kristy tenany mihitsy aza.Ny lisitr'ireo faminaniana tsy nahomby dia tokony ho fampitandremana madiodio fa tsy mino ny finoana ny tena manokana. Satria mety hampihena ny finoana ny diso diso lalana, dia mila mitandrina isika.
Tsy mila faminaniana mampitolagaga isika mba hiezaka mafy ho amin'ny fitomboana ara-panahy sy ny fomba fiaina kristiana. Ny fahafantarana ny fotoana sy ny tsipiriany hafa (na dia hita ho marina aza) dia tsy antoky ny famonjena. Amintsika dia i Kristy no tokony hifantohantsika, fa tsy ny lafy ratsiny sy ny lafy ratsiny, na iza na iza firenena matanjaka no azo adika hoe “bibidia”.
Ny fiankinan-doha amin'ny faminaniana dia midika fa tsy dia apetraka loatra amin'ny filazantsara isika. Tsy maintsy mibebaka ny olona ary mino an'i Kristy, na akaiky na tsia ny fiverenan'i Kristy, na hisy arivo taona, na tsia i Amerika no voalaza ao amin'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly.
Fa maninona no sarotra be ny manazava ny faminaniana? Angamba ny antony lehibe indrindra dia ny fitenenan'izy ireo matetika. Ireo mpamaky tany am-boalohany dia mety nahafantatra ny dikan'ny tandindona; satria miaina amin'ny kolontsaina sy fotoana hafa isika dia tena manahirana antsika ny fandikana.
Ohatra amin’ny fiteny an’ohatra: Salamo faha-18. Amin’ny endrika tononkalo no ilaritany ny fomba namonjen’Andriamanitra an’i Davida tamin’ny fahavalony (andininy 1). Nampiasa an’ohatra isan-karazany i Davida tamin’izany: fandosirana avy any amin’ny fanjakan’ny maty (4-6), horohoron-tany (8), famantarana eny amin’ny lanitra (10-14), na dia famonjena amin’ny fahoriana any an-dranomasina aza (16-17). Tsy tena nisy ireny zavatra ireny, fa ampiasaina amin’ny heviny an’ohatra sy amin’ny tononkalo mba hijerena sary an-tsaina ny zava-misy sasany, mba hahatonga azy ireo ho “hita maso”. Toy izany koa ny fiasan’ny faminaniana.
Ny Isaia 40,3:4 dia miresaka ny amin’ny hoe rava ny tendrombohitra, ny lalana nolalovana — tsy midika ara-bakiteny izany. Lioka 3,4-6 dia manondro fa tanteraka tamin’ny alalan’i Jaona Mpanao Batisa io faminaniana io. Tsy momba ny tendrombohitra sy ny lalana mihitsy ilay izy.
Joel 3,1-2 milaza mialoha fa hilatsaka “amin’ny nofo rehetra” ny Fanahin’Andriamanitra; Araka ny voalazan’i Petera dia efa tanteraka tamin’ny olona ampolony vitsivitsy izany tamin’ny andro Pentekosta (Asan’ny Apostoly). 2,16-17). Ny nofy sy ny fahitana nambaran’i Joela dia voazava ao amin’ny filazalazana ara-batana. Saingy i Petera dia tsy mangataka ny amin'ny fahatanterahan'ireo famantarana ivelany amin'ny teny kajy - ary isika koa. Rehefa miresaka momba ny sarin-javatra isika, dia tsy manantena ny hisehoan’ny tsipiriany rehetra amin’ilay faminaniana.
Ireo olana ireo dia misy fiantraikany amin'ny fomba fandikana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Ny mpamaky iray dia aleon'ny mpamaky fandikana ara-bakiteny, ny iray am-panoharana, ary tsy azo atao ny manaporofo hoe iza no marina. Izany dia manery anay hijery ny sary lehibe, fa tsy ny antsipirihany. Mijery fitaratra misy ranomandry isika, fa tsy amin'ny fitaratra be dia be.
Tsy misy ny marimaritra iraisana kristianina amin'ny faritra manan-danja amin'ny faminaniana. Ka mandresy z. B. ny lohahevitra momba ny fampakarana, ny fahoriam-po lehibe, ny arivo taona, ny manelanelana ary ny afobe tsy mitovy hevitra. Tsy tena zava-dehibe eto ny hevitry ny tsirairay. Na dia ampahany amin'ny drafitr'Andriamanitra sy zava-dehibe amin'Andriamanitra aza izany, tsy ilaina ny ahazoantsika valiny tsara rehetra - indrindra fa raha tsy mamafy fifandirana eo amintsika sy ireo izay mieritreritra tsy mitovy izy ireo. Ny toe-tsaintsika dia manan-danja kokoa noho ny fijerin'ny olona azy.
Angamba isika afaka mampitaha ny faminaniana amin'ny dia iray. Tsy mila fantarintsika mazava hoe aiza ny tanjontsika, ahoana ary amin'ny hafainganana ataontsika. Ny tena ilain'ny zavatra rehetra dia ny fahatokisana an'i Jesosy Kristy "mpitari-dalana". Izy irery no mahalala ny lalana, ary raha tsy misy izany dia manalavitra isika. Andao hifikitra aminy - hokarakarainy ny antsipiriany. Raha jerena ireo fambara sy ireo famandrihana ireo, te-handinika ireo foto-pinoana kristiana sasany mifototra amin'ny ho avy isika.
Ny fiverenan'i Kristy
Ny fisehoan-javatra lehibe lehibe izay hamaritra ny fampianarantsika momba ny ho avy dia ny fiavian’i Kristy fanindroany. Saika misy ny fifanarahana fa hiverina izy. Nambaran’i Jesosy tamin’ny mpianany fa “ho avy indray” Izy (Jaona 14,3). Tetsy an-danin’izany, dia nampitandrina ny mpianany izy mba tsy handany andro amin’ny fanaovana kajy daty4,36). Manakiana ny olona mino fa efa akaiky ny fotoana5,1-13), fa koa ireo izay mino ny fahatarana ela (Matio 24,45-51). Fitondram-pitondrantena: Mila miomana amin’izany foana isika, mila mivonona foana, izany no andraikitsika.
Nambaran’ny anjely tamin’ny mpianatra hoe: Raha niakatra ho any an-danitra Jesosy, dia mbola ho avy koa Izy (Asan’ny Apostoly). 1,11). Izy dia “haneho ny tenany ... avy any an-danitra miaraka amin’ny anjelin’ny heriny ao anaty lelafo” (2. Thessalonians 1,7-8e). Antsoin’i Paoly hoe “fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sy Jesosy Kristy Mpamonjy antsika” izany (Titosy). 2,13). Niresaka momba ny hoe “naseho i Jesoa Kristy” koa i Petera (1. Petrus 1,7; jereo koa ny andininy 13), toy izany koa i Jaona (1. Johannes 2,28). Toy izany koa ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo: “Hiseho fanindroany” amin’ireo “miandry Azy ho amin’ny famonjena” i Jesosy (9,28). Misy resaka momba ny “didy”, ny “feon’ny arkanjely”, ny “trompetran’Andriamanitra” (2. Thessalonians 4,16). Ny fiaviany fanindroany dia hazava, ho hita sy ho heno, tsy ho diso.
Hisy fisehoan-javatra roa hafa koa izy io: ny fitsanganana amin’ny maty sy ny fitsarana. Nanoratra i Paoly fa hitsangana ao amin’i Kristy ny maty amin’ny fiavian’ny Tompo, ary hotarihina ho any amin’ny rivotra ny mino velona mba hihaona amin’ny Tompo Izay midina (2. Thessalonians 4,16-17). “Fa hitsoka ny trompetra”, hoy ny nosoratan’i Paoly, “ary ny maty hitsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana.”1. Korintiana 15,52). Iharan’ny fiovana isika – tonga “be voninahitra”, mahery, tsy mety lo, tsy mety maty ary ara-panahy (and. 42-44).
Matio 24,31 Toa milazalaza izany amin’ny fomba fijery hafa: “Ary Izy [Kristy] haniraka ny anjeliny hitondra ny trompetra mamirapiratra, ary ireo no hanangona ny olom-boafidiny avy amin’ny vazan-tany efatra, hatramin’ny faravodilanitra rehetra”. Ao amin’ny fanoharana momba ny tsimparifary, i Jesosy dia nilaza fa amin’ny faran’ny taona dia “haniraka ny anjeliny izy, ary ireo dia hanangona avy amin’ny fanjakany izay rehetra mahatonga ny fihemorana sy ny mpanao ratsy, ka hanipy azy any amin’ny lafaoro misy afo mirehitra”. (Matio 13,40- iray).
“Fa ho avy ny Zanak’olona amin’ny voninahitry ny Rainy, mbamin’ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka izay nataony” (Matio 1.6,27). Ao amin’ny fanoharana momba ny mpanompo mahatoky, ny fiavian’ny Tompo fanindroany (Matio 24,45-51) ary ao amin’ny fanoharana momba ny talenta nankinina (Matio 25,14-30) koa ny fitsarana.
Rehefa tonga ny Tompo, hoy ny nosoratan’i Paoly, dia “hampiharihary” “izay takona ao amin’ny maizina ka hampiseho ny fanirian’ny fo. Dia samy hidera ny olona rehetra Andriamanitra » (1. Korintiana 4,5). Mazava ho azy fa efa fantatr’Andriamanitra ny olona rehetra, ka efa ela be talohan’ny fiavian’i Kristy fanindroany no niseho ny fitsarana. Fa avy eo dia "havoaka ho an'ny besinimaro" voalohany ary hambara amin'ny rehetra. Fampaherezana lehibe ny hoe nomena fiainana vaovao isika ary nahazo valisoa. Hoy i Paoly tamin’ny faran’ny “Toko momba ny fitsanganana amin’ny maty”: “Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika fandresena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika! Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza mihozongozona, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny asanareo ao amin’ny Tompo.”1. Korintiana 15,57-58).
Mba hahatonga ny fahalianana, ny mpampianatra faminaniana dia te-hanontany hoe: “Moa ve isika miaina amin’ny andro farany?” Ny valiny marina dia "eny" - ary marina izany nandritra ny 2000 taona. Nanonona faminaniana momba ny andro farany i Petera ary nampihatra izany tamin’ny fotoany (Asa 2,16-17), toy izany koa ny mpanoratra ny taratasy ho an’ny Hebreo (Hebreo 1,2). Naharitra ela kokoa noho ny eritreretin'ny sasany ny andro vitsivitsy farany. Ny ady sy ny fahasahiranana dia nampijaly ny olombelona nandritra ny an'arivony taona maro. Hiharatsy ve izany? Angamba. Mety hihatsara ny toe-javatra aorian'izay, ary hiharatsy indray. Na mihatsara kokoa amin'ny olona sasany izany ary miharatsy ho an'ny hafa indray miaraka. Nandritra ny tantara, ny “index of misery” dia niakatra sy nidina, ary mety mbola hitohy toy izany.
Imbetsaka anefa, ho an’ny Kristianina sasany, dia miharihary fa “tsy ho tonga ratsy” izany. Saika mangetaheta ny fahoriana lehibe izy ireo, izay lazaina fa fotoana faran’izay mafy indrindra ilàna izany.4,21). Manintona azy ireo ny Antikristy, ilay “bibidia”, ilay “lehilahy mpanota” sy ireo fahavalon’Andriamanitra hafa. Amin'ny trangan-javatra mahatsiravina rehetra dia mahita famantarana izy ireo fa efa akaiky ny fiverenan'i Kristy.
Marina fa nilaza mialoha i Jesosy fa hisy fotoam-pahoriana mahatsiravina (na: fahoriana lehibe) (Matio 2.4,21), fa ny ankamaroan’ny zavatra nambarany dia efa tanteraka tamin’ny nanaovana fahirano an’i Jerosalema tamin’ny taona 70. Nampitandrina ny mpianany momba ny zavatra tokony hiainan’izy ireo manokana i Jesosy; z. B. fa tsy maintsy nandositra ho any an-tendrombohitra ny mponin’i Jodia (and. 16).
Jesosy dia nanambara mialoha ny fotoana nilana azy mandra-pahatongany. “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana”, hoy izy (Jaona 16,33, Fandikana betsaka). Maro tamin’ny mpianany no nanao sorona ny ainy noho ny finoany an’i Jesosy. Anisan’ny fiainana kristianina ny fitsapana; Tsy miaro antsika amin’ny zava-manahirana antsika rehetra Andriamanitra4,22; 2. Timoty 3,12; 1. Petrus 4,12). Na izany aza, tamin'ny andron'ny apostoly, dia niasa ny antikristy (1. Johannes 2,18 & 22; 2. Jaona 7).
Moa ve ny fahoriana lehibe nambara mialoha? Betsaka ny kristiana mino fa, ary mety ny marina. Saingy manenjika an'izao tontolo izao ny kristiana an-tapitrisany manerantany. Betsaka ireo no maty. Ho an'ny tsirairay amin'izy ireo, ny fahasahiranana dia tsy hiharatsy noho ny teo aloha. Nandritra ny roa arivo taona mahery dia nahatsiravina ny Kristiana. Angamba ny fahoriana lehibe dia naharitra lavitra noho ny nieritreretan'ny olona azy.
Ny adidintsika kristiana dia mijanona ho mitovy hatrany, na akaiky na lavitra ny fahoriana - na efa nanomboka teo. Ny tombantombana momba ny ho avy dia tsy manampy antsika hanana bebe kokoa toa an'i Kristy, ary raha ampiasaina ho fitaovana tsindry hamporisika ny olona hibebaka izy, dia ho voarara. Ireo izay manombatombana momba ny fahoriana dia mampiasa ny fotoany amin'ny tsy fahampiana.
Ny Apokalypsy 20 dia miresaka momba ny fanjakana an'arivony manokan'i Kristy sy ireo olo-masina. Ny Kristiana sasany dia mahatakatra izany ara-bakiteny ho toy ny fanjakana izay maharitra arivo taona ary naorin'i Kristy tamin'ny fiverenany. Ny kristiana hafa dia mahita ny "arivo taona" amin'ny heviny an'ohatra, ho tandindon'ny fanjakan'i Kristy ao amin'ny fiangonana, alohan'ny fiverenany.
Ny isa arivo dia azo ampiasaina ara-panoharana ao amin’ny Baiboly 7,9; Salamo 50,10), ary tsy misy porofo fa tsy maintsy raisina ara-bakiteny izany ao amin’ny Apokalypsy. Ny fanambarana dia nosoratana tamin'ny fomba izay tena manankarena amin'ny sary. Tsy misy boky hafa ao amin’ny Baiboly miresaka momba ny fanjakana tsy maharitra haorina amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany. Andininy toa an’i Daniela 2,44 ny mifanohitra amin'izany aza, milaza aza fa ho mandrakizay ny empira tsy misy krizy 1000 taona aty aoriana.
Raha misy fanjakana arivo taona aorian’ny fiverenan’i Kristy, dia hatsangana ny ratsy fanahy ary hotsaraina arivo taona aorian’ny olo-marina ( Apokalypsy 20,5:2 ). Na izany aza, ny fanoharan’i Jesosy dia tsy manondro ny elanelana ara-potoana toy izany (Matio 5,31-46; John 5,28-29). Tsy anisan’ny filazantsaran’i Kristy ny arivo taona. Nanoratra i Paoly fa amin’ny andro iray ihany no hitsanganan’ny marina sy ny ratsy fanahy (2. Thessalonians 1,6- iray).
Fanontaniana maro hafa momba ity lohahevitra ity no azo resahina, saingy tsy ilaina eto io. Ny firaketana an-tsoratra dia azo jerena isaky ny seho voatanisa. Na inona na inona hinoan'ny olona momba ny arivotaona, dia azo antoka ny zavatra iray: amin'ny fotoana sasany dia mifarana ny vanim-potoana voatondro ao amin'ny Apokalypsy 20, ary nateraky ny lanitra vaovao sy tany vaovao, mandrakizay, feno voninahitra, lehibe kokoa, tsara kokoa ary lava noho ny arivo taona. Ka rehefa mieritreritra ny tontolo mahafinaritra isika rahampitso, dia aleontsika aza mifantoka amin'ny fanjakana mandrakizay sy tonga lafatra fa tsy amin'ny dingana fohy. Manana mandrakizay isika ary hiandrandrantsika azy!
Ahoana izany - ny mandrakizay? Ampahany ihany no fantatsika (1. Korintiana 13,9; 1. Johannes 3,2) satria ny teny sy ny eritreritsika rehetra dia mifototra amin’izao tontolo izao ankehitriny. Nasehon’i Jesosy tamin’ny fomba maro ny valisoantsika mandrakizay: Ho toy ny fitadiavana harena na fananana fananana be, na fitondrana fanjakana, na fanatrehana fanasana fampakaram-bady. Famaritana tombantombana ihany ireo fa tsy misy mitovy aminy. Ny mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra dia ho tsara tarehy kokoa noho ny teny.
Hoy i Davida: “Eo anatrehanao no misy be dia be sy fifaliana eo an-tananao ankavanana mandrakizay.” ( Salamo 16,11). Ny ampahany tsara indrindra amin’ny mandrakizay dia ny hiaina miaraka amin’Andriamanitra; ho tahaka azy; ny hahita azy amin’ny tena maha izy azy; mahafantatra sy mahafantatra azy tsara kokoa (1. Johannes 3,2). Izany no tanjona faratampony sy ny fahatsapantsika ny maha-izy an’Andriamanitra, ary hanome fahafaham-po antsika sy hanome antsika fifaliana mandrakizay.
Ary tao anatin'ny 10.000 taona, miaraka am-polony talohan'izay, dia hitodika ny fiainantsika anio ary hitsiky ny ahiahy ananantsika ary gaga amin'ny fomba haingana nataon'Andriamanitra ny asany fony isika mety maty. Vao fiandohana fotsiny izany ary tsy hisy farany.